प्रत्येक किसानलाई वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गराउने अबस्थामा कांग्रेसले पु¥याउने छ , । ईश्वरी कोइराला–प्रदेश सभा उम्मेद्वार मोरङ १ ‘ख’ नेपाली कांग्रेस | www.aagopati.com Websoft University
प्रत्येक किसानलाई वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गराउने अबस्थामा कांग्रेसले पु¥याउने छ , । ईश्वरी कोइराला–प्रदेश सभा उम्मेद्वार मोरङ १ ‘ख’ नेपाली कांग्रेस
लेटाङ÷आधा मोरङको भूगोल समेटेर बनेको मोरङ क्षेत्र नं. १ लाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले तताउँदै लगेको छ । खासगरी कांग्रेस उम्मेद्वारले मौसमी चिसोलाई चुनौति दिँदै प्रचार प्रसारको सरगर्मी बढाएका हुन । मोरङ १ को प्रदेश सभा ख का उम्मेद्वार ईश्वरी कोइराला यतिबेला आफ्ना सहयोगीका साथ पहाडी गाउँहरूमा जनको मन जित्नमा ब्यस्त छन् ।
साविक मोरङ ९ का सांसद एवं मोरङ कांग्रेसका सभापति समेत रहेका डिगबहादुर लिम्बूले विगतमा गरेका बिकास निर्माणका कामलाई पुरा गर्ने अभियानका साथ कोइराला गाउँ गाउँमा मतदाताको मन जित्न लागि परिरहेका छन् । कोइराला भन्छन–नदी कटान नियन्त्रण र प्रत्येक मतदाताको दैलो दैलोमा सडकको सञ्जाल पु¥याउँने अभियानका साथ काम गर्नेछु । उनले थपे–पहाडमा बिकास भनेको यातायात र विद्युतीकरण रहेछ । उनले विगत सम्झदै भने–१० वर्ष अघि सम्म सुँगुर र गाईलाई खोले खुवाइने स्कुस आज किसानको घर मै ठेक्का लाग्न थालेको छ । सन्तोलाले राम्रो बजार पाएको । अलैची खेती सुरु भएको छ । बिगतमा दुईछाक खान मुस्किल हुनेहरू आज अदुवा र अम्लिसो खेती गरेर आर्थिक रुपमा समृद्ध भएका छन् ।’उनी थप्छन–यो सबै कांग्रेसले सडक सञ्जाल पु¥याएर सम्भव भएको हो ।
बिकास गरेर कहिल्यै सकिदैन,अब कांग्रेसले ति सडकहरूलाई कालो पत्रे गर्ने सपना बोकेको छ । सडक सञ्जाल नहुँदा विगतमा थुप्रै बाबुहरूले आफ्नो सन्तान र देख्न पाएनन् । श्रीमतीलाई प्रसव पीडा कै कारण गुमाएका छन् । हामी यो बिगतलाई हेरेर कम्तीका सबै मतदाताको घर अगाडि एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो पु¥याउनु पर्छ भनेर लागेका छौं ।
कम्युनिष्ट राजनीतिबाट २०४१ मा तत्कालिन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसमा आएका कोइराला उम्मेद्वार भएकै कारण विकासको एजेण्डा प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्छन । भन्छन– मैले हिजो पनि ््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््बिजुली बत्ती विस्तार गर्न र खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन पहल गरें । धेरै वटा कृषि सडक खोल्ने काम गरें । लोख्रामा २६ सय तार जालि हालेर नदी तटबन्धको काम गरेको छु । कोइराला थप्छन–‘सिंचाईको समस्या भएको केराबारी, भोगटेनी, लेटाङ र नक्सलमा ‘केभोलेन’ परियोजना सञ्चालन गरेर यो क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनका लागि उर्भर क्षेत्र बनाएको छु । आज यसक्षेत्रको ३ हजार विगाहा जग्गामा सिंचाई पुगेको छ ।’
चुनाव जित्ने सम्भावना छ र भन्ने जिज्ञाषामा कोइराला भन्छन– म ६ हजार मतान्तरले चुनाव जित्छु ।आधारहरू प्रस्तुत गर्दै कोइरालाले अगाडि भने–२०३८ सालमा जनपक्षीय उपप्रधान पञ्च भए यता कुनै पनि सरकारी पदमा बसेर काम गरेको छुइन । तर ब्यक्तिगत जीवनमा मैले कति सामाजिक काम गरें भन्ने कुरा यहीका बासिन्दालाई सोध्नुहोस । ३० वर्ष अघिको उत्तरी मोरङ र आजको उत्तरी मोरङको तुलना गर्नुहोस । धरै काम गरेको छु । दीन दुखीलाई सहयोग गरेको छु । चन्दा र सहयोको कुरै नगरौं । धेरै दिन सकिन होला । तर म कहाँ आउनेलाई मेरो आर्थिक हैसियत अनुसार रित्तो फर्काएको छैन ।
बामगठन्धनले असर पार्दैन, भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन–‘प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा यहाँका नागरिक मिल्छन भन्ने लाग्दैन । यो २ मा २ जोडेर ४ हुने अंक गणितीय हिसाव होृइन । यहाँ भावनाको कुरो आउँछ , हिजो आँखा अगाडि भएका मार पीट, हत्या, चन्दा आतंकका घटनामा खाटो बसेको छैनन । हरेकका आँखा अगाडि ति घटना नाँचिरहेका छन् । हेर्नुस ,गठबन्धनको भोट जोडेर जित हुने भए किन चुनाव गरिरहनु प¥यो ।
चिसाङ खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने र बन्द गर्ने विषयमा बिवादमा आउनु भयो नि भन्ने जिज्ञाषामा उनी भन्छन–‘क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार हामीलाई छैन । मापदण्ड पु¥याएर चलाएका छन भने सरकारले चलाउन दिन्छ, पुगेको छैन भने सरकारले बन्द गर्छ । हिजो चिसाङ खोला किनारमा बसेर दुई छाक खान नपाएकाहरू आज आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका छन् । ३ सय वढीले रोजगार पाएका छन् ।त्यसैले मलाई कसैले विवादमा ल्याए पनि यो विषयमा मैले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छु ।
फरक प्रसंगमा उनले भने – हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तरघातको रोग
छैन । हिजो टिकटको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उभिएका साथीहरू आज चुनावी महा अभियानमा सँगै हुनुहुन्छ । चुनाव ब्यक्ति लडेको होइन । पार्टी लडेको हो । पार्टीले जित्दा हरेक कांग्रेसजनको शीर उँचो हुन्छ ।
कोइराला चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै भन्छन–‘मैले राजनीतिमा सबै ब्योहोरेको छु ।’ राजकाज मुद्धामा ८ महिना २६ दिन जेल बसेका कोइराला ५९ वर्षमा पहिलो पटक कांग्रेसले अवसर दिएको बताउँछन । पुरै जीवन राजनीतिमा कांग्रेसको झण्डा बोकेर बितिरहेको बताउँदै उनले भने– कुनै समय कांग्रेसले गाउँ बस्ने वातावरण थिएन , तर म आफ्नो गाउँ छोडेर कतै भागिन ।
कोइरालाले मोरङका पहाडी गाउँहरू रहेको क्षेत्र नं. १ ख लाई प्रदेशको
नमुना क्षेत्र बनाउने संकल्प गरेका छन् । उनी भन्छन–राजारानी पोखरी सम्म कालोपत्रे बाटो पुगेपछि त्यो क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकसित हुनेछ । सिंहदेवी क्षेत्रको मौसम भेडेटारको भन्दा राम्रो छ । त्यहाँ प्रत्येक घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उनले गम्भीर हुँदै भने– धेरै कुरा नगरौं,यस क्षेत्रमा फलफुल, तरकारी, नगदेबाली,चिया,पशुपालन गर्ने र होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रत्येक किसान र ब्यावसायिलाई खर्च कटाएर वार्षिक कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गराउने अबस्थामा कांग्रेसले पु¥याउने छ , यो हाम्रो र मेरो प्रतिवद्धता हो ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्दै गएको बताउँदै कोइरालाले भने शिक्षा,सञ्चार, विजुली, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार बिकासमा हामी निक्कै अघि छौ. । यो सब डिगबहादुर लिम्बूबाट सम्भव भएको हो । जहाँ सम्म, साविक ८ नं. बाट हाल १ नं.मा आएका गाउँहरू छन, तिनको बिकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि नै हामीले कांग्रेसलाई भोट मागेको हौं । उनी थप्छन–अबको हाम्रो अभियान जहाँ समस्या छ , त्यहाँ समाधान र बिकास बजेट लिएर पुग्ने नै हो ।
प्रस्तुति – हरि कोइराला